*(၁၂ /၂၀) မေ့မရတဲ့ စက်တင်ဘာလလေးရယ်။*
(၁၂ /၂၀ ) မေ့မရတဲ့ စက်တင်ဘာလလေးရယ်...ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် လေးကတော့ ကျမ ဘဝရဲ့ တဦးတည်းသော
မေမေနဲ့ တဦးတည်းသော သားလေး တို့ရဲ့ မွေးနေ့ လေးပါ။ ကျမ အတွက် သိပ်ကို အရေးကြီးတဲ့ မေမေနဲ့သားလေးအတွက် အမှတ်တရ အကြောင်းလေးတွေ ကိုသတိတရနဲ့ ရေးထားလိုက်တာကတော့....
စက်တင်ဘာ၂၀ရက်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ချစ်မေမေ အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်။
အရင်ရေးမဲ့အကြောင်းကတော့..မေမေအကြောင်းလေးပါ။မေမေ ကတော့ လာမယ်စက်တင်ဘာ(၂၀) ဆိုရင်
မေမေ မွေးနေ့လေးပါ ။မေမေ အကြောင်းကတော့ ကျမ သိပ်ရေးဘို့မလိုတော့ပါဘူး။ မေမေ အကြောင်းကို
ကျမ ထိုင်းနိူင်ငံရဲ့ အမေများ နေ့ကလဲရေးဖြစ်ခဲ့တယ်နော်။ မေမေက မျက်စိ နားနှာခေါင်း လည်ချောင်းဆေးရုံ (ရန်ကုန်မြို့)(Theater Sister) လုပ်ပါတယ်။ ခုတော့ ပင်စင် ယူသွားပါပြီး။
မေမေမွေးနေ့ အတွက် ကျမကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက် သွန်သင်ဆုံးမခဲ့တဲ့ မေမေကို ကျမ သိပ်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးနဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်အမှတ်တရလုပ်ပါတယ်။ဒီကဗျာလေးကကျမတို့ခေါင်ဆောင်ကိုယ်တိုင်
ကျမ....အတွက် အမြဲတမ်း အခက်ခဲ ကိုမျှဝေပြီး ခံစားပေးခဲ့တဲ့ မေမေအတွက်.......
ဒါပေမဲ့....မေမေလို... သမီး မေမေမြေးလေးအပေါ်မှာနားလည်အောင်လမ်း ညွှန်နိူင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့...မေမေလို... သမီး မေမေမြေးလေးအပေါ်မှာလမ်းမှန်ကိုသွန်သင်ပြနိူင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့...မေမေလို... သမီး မေမေမြေးလေးအပေါ်ကိုယ်တာဝန်ကိုကိုယ်ကျေပွန်နိူင်အောင်ဆုံးမနိူင်ပါတယ်.။
ဒါပေမဲ့...မေမေလို.... သမီး မေမေမြေးလေးကို မိခင်ကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိူင်ပါတယ်.။
မေမေ မွေးနေ့မှာ ကျန်းမာပါစေ၊စိတ်ချမ်းသာပါစေ၊မေမေမျှော်လင့်ထားတဲ့ လိုအင်ဆန္န အမြန်ဆုံးပြည့်ဝပါစေ
လို့ ဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ မေမေကို...လက်အုပ်မိုးပြီးကန်တော့လိုက်ပါတယ်မေမေ..။
စက်တင်ဘာ၁၂ရက်နေ့ ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ချစ်သားလေး (မြတ်ပုည) ခေါ် (မီကို) လေးမွေးနေ့
သားကဒီနေ့ဆိုရင် (ရ)နှစ်ပြည့်ပါပြီး၊ လွန့်ခဲ့တဲ့ (ရ)နှစ်က ရန်ကုန်မှာမွေးခဲ့တဲ့သားလေးဟာခုတော့မဲဆောက်မှာ
ကြီးပြင်းလာခဲ့ ပါတယ်။မိဘတွေ သွားရာကို ဘယ်တော့မှာ စိတ်မညစ်တတ်တဲ့ ကလေးပါ။ရောက်တဲ့နေရာမှာ
မွေးခါနီးမှာ အကိုဇာ(စံဇာဏီဘို)နဲ့အမကြီး(မခင်ခင်ဌေး)တို့အိမ်ရောက်တော့ ကိုစံဇာဏီဘိုက လာငါညီမကို
ဗေဒင် တွက်မယ်ဆိုပြီးတွက်ပေးခဲ့တယ်၊ကိုစံဇာဏီဘိုက ကျမတို့နဲ့တလမ်းထဲမှာငယ်ငယ်ကတူတူနေလာခဲ့တာပါ
ယခုတော့(ဗိုလ်ရာညွှန့်လမ်း)ယခင်ကတောဆင်းဒဝစ်လမ်းမှာပေါ့၊နောက်တော့ကြို့ကုန်းကိုပြောင်းသွားတာပါသူ့တို့က။ သူ့ ကျမကိုဗေဒင်တွက်တော့ကျမကိုဗိုက်ခွဲရမယ်၊ဆိုပြီးပြောပါတယ်၊ကျမကမထင်ခဲ့ဘူး၊ညီမဒီလောက်
ခုဆိုရင်ထိုင်းစကားကို ကျမတို့ကိုပြန်တောင် သူသင်ပေးနေပါပြီး၊ကျမတို့အိမ်ရှင်နဲ့စကားပြောလဲ သူပြော ပေးတယ်။ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းသူပြောပေးတယ်၊နောက်ရုံးတွေသွားလဲ သူကိုအားကိုးနေရပါတယ်၊ နောက်TV
မြန်မာစာကိုလဲ သူသိပ်ကြိုက်တယ်၊သူ့ကိုသင်ပေးထားတယ်၊ဒါပေမဲ့သူမြန်မာလို့ အပြောခံရမှာတော့သူရှက်သ
လိုဘဲ၊သူ့ကိုဆုံးမတိုင်းအမြဲပြောရတယ်၊ သားမေမေတို့ကမြန်မာ ဘာရှက်စရာရှိလဲ ဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူး
ကိုယ်မြန်မာကို မြန်မာလို့ မပြောတာကမှ ရှက်ဘို့ကောင်းတယ်သားလို့ သူ့အဖေနဲ့ ကျမအမြဲပြောပြရှင်းပြရတယ်၊
ပြောလွန်းလို့လားမသိဘူး၊ခုတော့ သူ့ကိုမေးတိုင်းသူမြန်မာဘဲ ပြောတော့တယ်၊အရင်ကတော့သူထိုင်းလို့ဘဲ
ကဘာပြောလဲမေမေတို့ကိုပြောဆိုရင် သူမလိမ်ပါဘူး၊သားအတန်းထဲမှာ စကားများလို့မေမေတို့ကိုပြောပြတာပါ။
ကတော့စက်ရုပ် တွေဘဲ သူစိတ်ဝင်စားတယ်၊ကျန်တာဘာမှသူမကြိုက်ဘူး၊
သားအပါအဝင်သူငယ်ချင်းသုံယောက်ရှိတယ်၊ အားလုံးမြန်မာတွေဘဲ၊ သိပ်လဲချစ်ကြတယ်၊ခုတော့တိုက်ကွန်နိူ
ကောင်းစေချင်တာပါဘဲ၊ကျမ ဘဝ ရဲ့တိုင်ပင်ဖော် ဟာကျမသားပါဘဲ၊၊
သားအတွက် မွေးနေ့ လက်ဆောင် မေမေတို့ မိသားစုကဗျာလေး....သားဒီနေ့ကစပြီး မေမေနဲ့ဖေဖေတို့နဲ့
“ ၈၈” မှာသိခဲ့တာ ..
မှတ်မှတ်ရရ မင်း်နဲ့ငါ ....
“ ၉၃” မှာပြန်တွေ့ရာ...
“ ၉၄” မှာနှစ်ယောက်တစ်ဘ၀...
“ ၂၀၀၂” မှာသားသား “ မီကို” တိုးခဲ့တာ...
မီကို တို့ မိသားစုလေးဟေ့.။
(၁၂/၂၀) မေ့မရတဲ့ စက်တင်ဘာလရယ်...မွေးနေ့လေးမှာ လာစားသွားကြနော်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, September 12, 2009
*သံတိုင်ကြား က N.L.D လူငယ်များ ရဲ့ ထောင်တွင်းမေ့လို့မရတဲ့ကိုယ်တွေ့များ*
*သံ တိုင် ကြား ကN.L.Dလူငယ်များရဲ့ထောင်တွင်းမေ့လို့မရတဲ့ကိုယ်တွေ့များ* ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အတူ ကျမ တို့နိူင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်တွေကN.L.D.ပါတီဝင်တွေအပေါ်မှာညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပုံတွေ ကျမ လက်လှမ်းမှီ
ကျမ(မြတ်လေးငုံ)ကိုယ်တိုင်(သံတိုင်ကြားကN.L.Dလူငယ်များရဲ့ထောင်တွင်းမေ့လို့မရတဲ့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်များ)ဆိုတဲ့အစီစဉ်လေးကို ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ N.L.D (လူငယ်)တဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုမိုးဇော်ဦးနဲ့စကားလက်ဆုံမေးမြန်း ထားခဲ့တာတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးပါမယ်။
ကိုမိုးဇော် ဒီနေ့ညီမက အကိုရဲ့ ထောင်တွင်း အတွေ့အကြုံလေးတွေ နောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပါတီဝင် တယောက်အနေနဲ့မေးမြန်းမယ်နော်..။ ကိုမိုးဇော် N.L.D ပါတီကို ဘယ်ချိန်စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါသလဲ?
ပါတီ စတင်တည်ထောင်ခြင်းမှာတော့ လူငယ်တဦး အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၈၉. ဇွန်လမှာ ဗဟိုလူငယ်၊
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကိုမိုးဇော် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလဲရှင်?
ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိူင်ရေး (ဗဟိုလူငယ် ) အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ။်
ကိုမိုးဇော် ထောင်ကျခဲ့တာ ဘယ်ပုဒ်မနဲ့လဲ?၊ နောက်ဘယ်သူတွေပါသေးလဲ? ၊ကိုမိုးဇော်ကို ဘယ်မှာလာ ဖမ်း ခဲ့ တာလဲပေးပါရှင်၊၊
ပုဒ်မကတော့၅(က(ခ)ည၊ (၂၃.၁၀.၁၉၉၀ )မှာ အိမ်ကိုလာပြီးခေါ်သွားပါတယ်။ အဓိက ကတော့ ဗဟိုကော်မတီ
အစည်းအဝေးကို လူငယ်တွေ ကတင်တဲ့ လိုင်းသုံးလိုင်းနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုစာတမ်းတွေ့ကြောင့်ဖမ်းခဲ့တယ်။
နောက် ရေကြည်အိုင်စစ်ကြောရေးစခန်းမှာ တလတိတိနေခဲ့ပြီး အင်စိန်ထောင်ရဲ့သီးသန့်တိုက်ကို
ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အကို အမှုတွဲပါတဲ့ လူတွေကတော့ ၁၆ ယောက်ပါ၊ သူတို့တွေကတော့...
(၁)။ဦးကြည်မောင်- ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် (ဗဟန်းပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)
(၂)။ဦးချမ်းအေး - ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် (မော်လမြိုင် ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စား
(၃)။ဦးစိုးသိမ်း(မောင်ဝံသ) - ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်(ဝေါပြည်သူ့လွှတ်တော်
(၄)။ဦးတင်ထွတ်- ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဝင် ( အိမ်မဲပြည်သူ့လွှတ်ကိုယ်စားလှယ်)
ကိုမိုးဇော်ကို အမိန့်ချခဲ့တာ ထောင်ဒဏ် ဘယ်နှစ်နှစ်ချခဲ့တာလဲရှင်?
(၁၀)နှစ်ပါ။ (၁၅.၅.၁၉၉၁) မှာအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်၊ အကိုတို့အမှုတွဲအကုန်းလုံး၁၆ယောက်မှာ (၁၀)နှစ်ကျတာရယ်
ထောင်ဒဏ်(၁၀)နှစ် ဆိုတာအဲဒီအချိန်တုံးက အများဆုံးချတာဘဲနော်၊ ညီမသိသလောက်တော့။
ကိုမိုးဇော်ကို အမိန့်ချတဲ့ အဲဒီနေ့လေးက၈၈ထဲက နေကျောင်းတွေ မဖွင့်ဘဲထားပြီး ပထမဆုံး အကြိမ်ပြန်ဖွင့်ခဲ့
နေ့လေးတနေ့နော်.တက္ကသိုလ်ရဲ့ အဓိပတိလမ်းကြီး ပြန်လည်စိုပြေခဲ့တဲ့နေ့တနေ့ဆိုရင် မမှားပါဘူး.၊
ညီမ မှတ်မိတယ်၊ ကိုမိုးဇော် ကတော့ဘဝတက္ကသိုလ်ကို စတက်ရတဲ့ နေ့လေးပေါ့နော်။
ဟုတ်တယ်၊ ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို ထပ်ပြီးရလာတဲ့နေရာကို ရောက်ခဲ့ရတာဘဲ။
ကိုမိုးဇော် အင်စိန်ထောင် မှာဘဲ (၁၀) နှစ်လုံးလုံးနေခဲ့ရလား?
၁၉၉၁ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၉၅ ထိနေခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၅သြဂုတ်လမှာ သရက်ထောင်ကို ပြောင်းရွေခဲ့ရတယ်။
သရက်ထောင်က သိပ်ကိုကြမ်းတန်းတဲ့ထောင်လို့ ညီမကြားဘူးခဲ့တယ် ဟုတ်လားအကို?
ဟုတ်ပါတယ်၊ တကယ်ငရဲဘုံပါဘဲ၊ သရက်ထောင် ကိုစတင်ဝင်တာနဲ့ ထောင်ဝင်ကြေးကို ပေးခဲ့ရတယ်။
(ထောင်ဝင်ကြေးဆိုတာကတော့ မိန်းဂျေထောင်ဘူးပေါက် ကနေကိုယ်နေရတဲ့အခန်းကို မရောက်မခြင်း
ထောင်ဝါတာတွေက တုတ်နဲ့ရိုက်တာပါဘဲ၊)သရက်ထောင်ကိုရောက်ပြီး ဆိုရင် ထောင်ဝင်ကြေးပေးခံရတာပါ။
အကိုက သိပ်မကြာဘူး တလလောက်ဘဲနေပြီး အင်စိန်ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။
ဘာလို့ အင်စိန် ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ ရတာလဲ ကိုမိုးဇော်၊၊
အကိုတို့ အမှုလေ ၅(က)(ခ)ည အဲဒီအမှုအတွက် ပြန်စစ်ဆေးချင်း လို့ဆိုပြီးပြန်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။
ကိုမိုးဇော်အမှု ပြန်စစ်ဆေးခံရတော့ ကိုမိုးဇော် နောက်ထပ် ပစ်ဒဏ် ခံရသေးလား?။
ကိုမိုးဇော် ညီမ သိတာတခုရှိသေးတယ်၊ ကိုမိုးဇော် ထောင်ဝင်စာပိတ်ခံခဲ့ရတယ် ဆိုတာလေ ဘာကြောင့် လဲဆိုတာ သေချာပြောပြ ပေးပါအုံးအကို။
ဟုတ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ (၁၉၉၅) မှာလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
ပထမဆုံးအကြိမ် လွတ်မြောက်လာလို့ ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ဆုပြီးလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီး
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ ကိုပေးပို့ကြတယ်။ နောက်တခုကတော့ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေ
အတွင်းရေးမှူးး ထံကို ထောင်ထဲကလူအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှု တွေကိုစာတမ်းပြုစုပြီးတင်ခဲ့တာရယ်
နောက်တခု ကျန်သေးတယ်၊ အဲဒါက ထောင်အတွင်းအထိမ်းအမှတ် စာအုပ်များထုတ်ဝေခဲ့တယ် နိုင်ငံရေး
အကျဉ်းသား အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ ထုတ်ခဲ့တယ်။ ဒါကို အာဏပိုင်တွေက သိသွားလို့ပါ။
ကိုမိုးဇော် ထောင်ဝင်စာ (၆)လ ပိတ်ခံရပြီး အင်စိန်ထောင်မှာ ဘဲဆက်နေခဲ့ရတာပေါ့နော်။
မဟုတ်ပါဘူး ၁၉၉၆ နိူဝင်ဘာလ မှာသရက်ထောင်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုမိုးဇော် သရက်ထောင် ကိုပြန်ရောက်တော့ ထောင်ဝင်ကြေးထပ်ပေး ခံခဲ့ရတာဘဲလား?။
သရက်ထောင် ပြောင်းထပ်ပါတော့ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထဲက ၆ယောက်ဘဲပါတယ်၊ ကျန်တာကတော့
ရာဇဝင် လူဆိုးတွေနှစ်ကြီးသမားတွေက ၄၄ ယောက်ပါခဲ့တယ်။ ထောင်ဝင်ကြေး တော်တော် လေးခံ
လိုက်ရတယ်။ မိန်းဂျေ ရောက်တော့မှာ အကျိင်္တွေကို အားလုံးချွတ်ခိုင်းပြီး ဆေးမှင်ကြောင် ထိုးတာတဲ့လူတွေကို
ပိုပြီးရိုက်ခံရတယ်။ အကိုတို့ လဲရိုက်ခံရတာပါဘဲ၊ နောက်မှာ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသား၆ယောက်ကို အရင်ခေါ်ပြီး
သရက်ထောင် ရောက်တော့ အကိုအတွက်မမေ့နိူင်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေထဲက တခုလောက်ပြောပြပေး ပါလား။
တော်တော်များများရှိခဲ့တယ်။ တခုလောက်ဘဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့၊ ၁၉၉ရ ခုနှစ်တုံးအကြောင်းလေးကို ပြောပြပါမယ်၊ ကိုဆန်နီအကြောင်းလေး... ညီမကိုဆန်နီကိုသိတယ်နော်.. သူကိုထောင်မှူး(စိုးမြင့်အောင်)
အလွန်းဆိုးရွားသော ထောင်မှူးက အပစ်မရှိဘဲနဲ့ကြမ်းတမ်းသော စကားအသုံးအနှုန်း တွေနဲ့ပြောဆိုပြီးတော့
တုတ်နဲ့ မတရားသဖြင် ရိုက်ခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့ အကိုတို့ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ မခံနိူင်လို့ထောင်မှူးက
ိုဝိုင်းအော်ကြတယ်၊ သရက်ရောက် နေတဲ့ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံးလိုလိုပါဘဲ။ ဒါကိုထောင်ကိုဆူပူ အောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးထောင်ကို လှန့်ခဲ့တယ်။ ထောင်လှန့်ထားတဲ့ အချိန်မှာ ထောင်အာဏပိုင် သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခွင့်ရှိတယ် လိုလဲထောင်မှူး စိုးမြင့်အောင်ကပြောသေးတယ်။
ကိုမိုးဇော် တို့ဝိုင်းအော်တော့ထောင်မှူး ကအကိုတို့ကို ဘာမှမလုပ်ဘူးလား?
လုပ်တာပေါ့။ သရက်ထောင်မှာ အပြင်းထန်းဆုံးဖြစ်ရပ် တခုပါဘဲထောင်းမှူးက ထောင်ဝါတာအားလုံးကို ကျန်တဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို အားလုံးဝိုင်းရိုက်ခိုင်းတာပြီးတာနဲ့သူမကြေနပ်သေးဘူး၊ သူကိုတိုင်လိုက်ကြည့်ပြီး၊
သူထင်တဲ့ လူတွေကိုေ ခ်ါပြီး ပစ်ဒဏ်တိုက်ကိုပို့ခဲ့တယ်။
ကိုမိုးဇော် ပစ်ဒဏ်ပေးတဲ့ထဲမှာ ဘယ်သူတွေပါလဲ?၊ ဘယ်လောက်တောင် အပစ်ပေးခဲ့လဲ ပြောပြပေးပါလား?။
၁၆ ယောက်ပါသွားတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အကိုအပါအဝင်ပေါ့၊ အပစ်ကိုတော့ ၂ ပါတ်ချခဲ့တယ်။ ဒီ ၁၆ ယောက်လုံး
ကိုတော်အပစ်ပေးတဲ့ တိုက်ကိုအသွားမှာလမ်းတောက်လျှောက် ဟိုဘက် ဒီဘက်ဝိုင်းရိုက် ကြတာဘဲ၊
ခေါင်းရယ်ကျောရယ် ဂုတ်ရယ်ကိုရိုက်တာပါ။ အကိုကတော့ အဲဒီမှာခေါင်းကိုထိမှာဆိုလို့ လက်နဲ့ကာတာ
လက်ညိုးကျိုးသွားခဲ့တယ်။ ကိုယ်နေရမဲ့တိုက်ကို ရောက်တော့တခန်းကို ၂ယောက်နေခဲ့ရတယ်။ ကိုယ်ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်တထည် ကိုယ်တခုဘဲပါတယ်။ စောင်မရှိဘူး။ ခေါင်းအုံးမရှိဘူး။ ဖျာမရှိဘူး။ စားဘို့
အတွက်ဒန်ခွက်တခွက် ပုဂံတချပ်တာ ဘဲပေးတယ်။နောက် အပေါ့အလေးအတွက် ဖလားတခုပေးတယ်။
ရေချိုးခွင့်မရှိဘူး။ မျက်နှာသစ်ခွင့်။ သွားတိုက်ခွင့်မရှိဘူး။အခန်းအပြင်ကိုလုံးဝထွက်ခွင့်မရှိဘူး။ ကျန်းမာရေးကိုလဲဘာတခုမှမလုပ်ပေးဘူး။ အကိုဆိုရင်ကျိူးနေတဲ့လက်ညိုလေးက အရမ်းကိုက်လာလို့ပြချင် တာကိုပြောတာလုံးဝမလုပ်ပေးခဲ့ပါဘူး။ ကိုယ်စွန့်ထားတဲ့အပေါ့အလေးတွေကိုလဲ အပြင်မှာပြစ်ခွင့်မရှိဘူး။
မနက်ကိုဆန်ပြုတ်ကျွေးတယ်။ နေ့လည်ကြတော့ပဲဟင်းနဲ့ထမင်းလာပို့တယ်။ ညစာမနက်စာပေါ့။ သူပေးတဲ့
အင်းညကြပြန်တော့ ဒီဒန်ခွက်လေးကိုဘာလုပ်ရပြန်လဲဆိုတော့ကိုယ်စွန့်ထားတဲ့အပေါ့ တွေကို ဖလားပြည့်
နေတာနဲ့အပြင်ကို ခပ်ပြီးသွန်ခဲ့ရပြန်တယ်လေ။ ဒီလိုနဲ့ဘဲ ဒန်ခွက်ကလေးလဲ အလုပ်သုံးလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ကိုမိုးဇော် သရက်ထောင်မှာ ဆေးမှူးတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲ၊?
၂ယောက်ရှိတယ်။ တယောက်ကဆေးခါးကြီး (ကျော်မြင့်)့။ သူကိုဘာလိုဆေးခါးကြီးကျော်မြင့် လို့ပေးထား
ရတာလဲဆိုရင်သူက ဒိတ်လွန်တဲ့ဆေးတွေကိုရောကြိုပြီး လူနာတွေကို ရေနွေးနဲ့တိုက်လို့ပါ။ နောက်တယောက်ကတော့သေပလေ့စေ(စောထွန်းအောင်ကြည်)သူကြတော့အပ်ငွေရှိလားဆိုပြီး လူနာကို အရင်မေးတယ်လေ. အပ်ငွေရှိရင် သူက ဆေးကုတယ်၊ မရှိရင်သေပလေ့သေကွာ ဆိုပြီးထားလိုက်တာဘဲ။ (အပ်ငွေဆိုတာကတော့ထောင်ဝင်စာလာလို့အိမ်က ထောင်ဝန်းထမ်းတွေကိုအပ်ထားတဲ့ငွေကိုခေါ်ပါတယ်။)
ကိုမိုးဇော် တို့ထောင်ထဲမှာ နေနေရတဲ့အချိန်တွေမှာ တခါတလေ စ်ိတ်ပျော်ရွှင်ဘို့လုပ်ခဲ့ကြသေးလားအကို။
လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့၊ မွေးနေ့အထိမ်းးအမှတ်တွေ၊ ကိုယ်ဖတ်ဘူးတဲစာအုပ်တွေ အကြောင်းကို ဖလှယ်တာတွေ၊
ကိုယ့်ကောင်မလေး သူ့ကောင်မလေး အကြောင်းတွေပြောကြပေါ့ ကျောင်းတက်တုံးက ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာ တွေပြောရင်းနဲ့၊ စိတ်ထွက်ပေါ်က်ကို ရှာခဲ့ရတာပေါ့။ တာတွေကလဲ ထောင်ထဲမှာ အခြေအနေပေးမှာ
ကိုမိုးဇော် နှစ်ပြည့် နေခဲ့ရတာပေါ့နော်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ၁၉၉၉ ဖေဖော်ဝါရီလ မှာလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုမိုးဇော်လွတ်လာပြီး၊ သရက်ထောင်ထဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေ ကျန်ခဲ့မှာဘဲနော် လွတ်ရက်စေ့ပြီးမလွတ်တဲ့
ရှိသေးတယ်၊ ကိုဘမျိုးသိန်း၊ ကိုသန်းဇော်၊ တို့က နှစ်ပြည့် လို့ကျော်နေပါပြီ မလွတ်သေးဘူး။ သူတို့က
အနှစ်(၂၀) အမိန့်ချခံခဲ့ရတာပါ၊
ကိုမိုးဇော် နောက်ဆုံး မေးချင်တာက ခုလက်ရှိ အကိုဘယ်မှာ ဆက်လက်လုပ်နေပါသလဲ ဆိုတာကိုပါ?
လက်ရှိကတော့ N.L.D(LA)မှာ ဗဟိုကော်မတီဝင် လုပ်ရင်း N.L.D(LA) နိူင်ငံခြားရေးဌာနမှာ အတွင်းရေးမှုး
ကိုမိုးဇော် ဘာပြောချင် ပါသေးလဲ?
အချိန်တွေဟာ သိပ်ကို ကြမ်းတမ်းခဲ့ရပါတယ်။ ယနေ့ချိန် ထိ မြန်မာပြည်က ထောင်တွေ အသီးသီးမှာ နေနေခဲ့ရသေးတဲ့ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသား တွေကိုတကယ် ကိုယ်ခြင်းစာနာ ပြီး ဂုဏ်ယူလေးစားလျှက်ပါ။
ညီမ ကို စိတ်ရှည်စွာနဲ့ ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ ကိုမိုးဇော် ကိုကျေးဇူးပါဘဲ။
ထောင်ထဲက အခြေအနေတွေကို ဒီလိုမျိုးတွေ စိတ်ရှည်စွာနဲ့ စာမျက်မှာပေါ်မှာ တင်ပြပေးတဲ့. ညီမမြတ်လေးငုံ
ကျမတို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ် ကပါတီဝင်တိုင်း ကိုစစ်အာဏာပိုင်တွေဟာ မတရား
ဖမ်းဆီးချူပ်နှောင်းခံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို ကျမ လက်လှမ်းမှီ သလောက်တင်ပြပေးသွားပါမည်ရှင်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, September 10, 2009
* ကျန်းမာရေး မကောင်းသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ဆေးရုံတက် ကုသခွင့်မပြု *
*ကျန်းမာရေး မကောင်းသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဆေးရုံတက်ကုသခွင့်မပြု*မော်လမြ်ိုင်အကျဉ်းထောင်မှ ကိုချစ်မင်းလေး၊ ထောင်ဒဏ် (၁၀၄) နှစ်အပြစ်ပေးခံထားရသည့် အထက်ဗမာပြည် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဘိုမင်းယုကို၊ ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ကျခံနေရသော News Watch ဂျာနယ်မှ ကိုဇော်ထွန်းနှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ မမြတ်ကေသီအောင် တို့သည် ထောင်တွင်း၌ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဆိုးရွားလျှက်ရှိ
သော်လည်း ထောင်အာဏာပိုင်များက ဆေးကုသခွင့်မပေးဟု သတင်းရရှိသည်။
သရက်ထောင်တွင် ထိန်းသိမ်းခံထား ရသည့် ကိုဘိုမင်းယုကို မှာမန္တလေးတွင် ထောက်လှမ်းရေးကစစ်ဆေး
မေးမြန်းစဉ် ရရှိခဲ့သောဒဏ်ရာများအပြင် မန္တလေးအကျဉ်းထောင်တွင် တိုက်ပိတ်ထားစဉ်ကခြေထောက်များချိ၍ လမ်းကောင်းစွာမလျှောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ယခု သရက်အကျဉ်းထောင်တွင်ရှိနေသော ကိုဘိုမင်းယုကိုမှာ
အစာအိမ်ရောဂါနှင့် ခြေထောက်ချိနဲ့ခြင်းရောဂါတို့ကို ခံစားနေရသော်လည်း အကျဉ်းထောင် အာဏာပိုင်များက ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှုမပေးဟု သတင်းရရှိသည်။ သရက်ထောင်တွင် ကိုဘိုမင်းယုကိုနှင့်အတူရှိသော ထောင်ဒဏ် နှစ် ၅၀ ကျခံနေရသည့် ကိုညီညီမှာလည်း အစာအ်ိမ်ဝေဒနာကိုခံစားနေရသည် ဟုသိရသည်။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုထွန်းထွန်း၏ဇနီးဖြစ်သူ မမြတ်ကေသီအောင် အားထားရှိရာ ထားဝယ်ထောင်
တွင်းရှိ အမျိုးသမီးဆောင်မှာ ကျန်းမာရေးနှင့် လျှော်ညီခြင်းမရှိ ဟုမကြာခင်က ထောင်မှလွတ်မြောက်လာသည့် သာမန်အကျဉ်းသူတစ်ဦးက Freedom News Group သို့ ပြောသည်။ မကေသီအောင်သည် ယခင်နှစ်ဒီဇင်ဘာလကကုသခွင့်မပေးပဲ ယခင်သီတင်းပတ်က မန္တလေးထောင်သို့ ပြန်လည်ပို့ ဆောင်ကာ
ထောင်တွင်းဆေးရုံ၌ပင် ကုသပေးသည် ဟု သူမ၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးကပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ဆင်းရဲကျပ်တည်းစွာဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေရသည့် မိခင်ဖြစ်သူ ဆုံးပါးသွားပြီးနောက် ထောင်ဝင်စာတွေ့မည့်သူပင်မရှိတော့သည့် မော်လမြိုင် အကျဉ်းထောင်မှ ကိုချစ်မင်းလေးမှာ ကျောရိုးကျဉ်းပေါင်းတက် ရောဂါဝေဒနာကိုခံစားနေရသော်လည်း ထောင်ဆရာဝန်က လုံလောက်သည့် ဆေးဝါးညွှန်ကြားမှု မပေးဟု သိရသည်။ ကိုချစ်မင်းလေးသည် ဆုံးပါးသွားသောမိခင်၏ နာရေးအားလိုက်ပါပို့ ဆောင်ခွင့်မရ ဟုသိရသည်။
အင်းစိန်အကျဉ်းထောင် အဆောင် ၃ တွင် ထိမ်းသိမ်းခံထားရသည့် News Watch ဂျာနယ်မှ ကိုဇော်ထွန်းသည် အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့် အာရုံကြောအားနည်းခြင်းရောဂါ ကိုခံစားနေရသော်လည်း ထောင်အာဏာပိုင်
များက ပြင်ပဆေးရုံသို့ထုတ်၍ကုသခွင့်မပေး ဟု ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ဦးကပြောသည်။
ကျန်းမာရေး ချို့ ယွင်းနေသာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ထောင်အာဏာာပိုင်များက ပြင်ပဆေးရုံများတွင် တက်ရောက်ကုသခွင့်ရရှိရန်အကျဉ်းဦးစီးဌာနညွှန်ချုပ်နှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စာတင်ပေးသော်လည်း အကြောင်းပြန်ကြားခြင်း လုံးဝမပြုဟု အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက
Freedom News Group သို့ပြောသည်။
အကျဉ်းထောင် အတွင်း မသေသင့်ဘဲသေဆုံးခဲ့ရခြင်းများမှာ၊ များပြားခဲ့ရပါသည်၊ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ
*ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ * အမှတ်တရ
*ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ*အာရှနေ၀န်း မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင် ဆရာတော်
ဦးဥတ္တမနေ့ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ကျရောက်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးသို့ အသိပေး တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
• ဟေ့ကောင် ကရက်ဒေါက်(အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံ)မင်းထွက်သွားစမ်းပါ။
ဘုန်းကြီးဦးဥတ္တ (ခေါ် ) ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ (ခေါ် )
ဘိက္ခုဥတ္တမ (ခေါ် ) ပေါ်ထွန်းအောင်
(ဖိုင်တွဲအမှတ် - ၃ A – 1 OF 1927 )
အဖအမည် - ဦးမြသာဦး။
မွေးသက္ကရာဇ် - ခရစ်နှစ် ၁၈၈၀- ခု။ဒီဇင်ဘာ(၂၈)ရက်။
ညီမ မအိမ်စိုးတို့ နှစ်ဦးရှိသည်။
မွေးရပ် - စစ်တွေမြို့ ။
အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ်တွင် စစ်တွေမြို့၌ ပရိယတ္တိသင်ကြားရာတွင် အကျော်တစောရှိသော ရွှေစေတီကျောင်းဆရာတော်ဘုရားထံ ဗုဒ္ဓ၏ အခြေခံစာပေများကို လေ့လာသင်ယူသည်။
(၁၅) နှစ်အရွယ်တွင် ပေါ်ထွန်းအောင်နှင့် ညီငယ်ကျော်ထွန်းအောင် ရှင်သာမဏေအဖြစ် သင်္ကန်းစည်းကြသည်။ ရှင်ဥတ္တမနှင့် ရှင်အရိယဟူသော ဘွဲ့ နာမများရရှိခံယူကြသည်။ထို့နောက် အရှင်ဦးဥတ္တမရဟန်းဝတ်ဖြင့်ရန်ကုန်၊မအူပင်၊ပဲခူး၊တောင်ငူ၊မန္တလေးနှင့်ပခုက္ကူမြို့များတွင်လှည့်လည်နေထိုင်
တောင်ငူမြို့ တွင်ရှိစဉ် ရှင်သာမဏေစာပြန်ပွဲတစ်ခုကို ၀င်ရောက်ဖြေဆိုရာ ပထမရသည်။ တောင်ငူမြို့ မှ
ရှမ်းမကြီးတစ်ဦးက သားအဖြစ်မွေးစားလိုကြောင်းပြော၍ မွေးစားလိုလျှင် ကာလကတ္တားကို ပညာသင်လွှတ်မလားဟု တောင်းဆိုရာ ထိုအမျိုးသမီးကြီး၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် လူဝတ်လဲကာ အသက်(၁၇) နှစ်အရွယ်တွင် ကာလကတ္တား၌ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ခေတ်ပညာများကို သင်ယူပြီး (၁၀)တန်း စာမေးပွဲကို အလွတ်ပညာသင်အဖြစ် ဖြေဆို အောင်မြင် ခဲ့သည်။ထိုနှစ်မှာပင် ကာလကတ္တားမှပြန်လာပြီး ရှင်ဝတ်ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေကျမ်းဂန်များကို သင်ယူသည်။
ထိုစဉ် ဘုံဘေဘားမားကုမ္ပဏီ ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းအောင်ကျော်က ရဟန်းဒါယကာပြု၍ အသက်(၂၀) အရွယ်တွင် ရဟန်းအဖြစ်ခံယူသည်။အရှင်ဥတ္တမသည် ရဟန်းအဖြစ်ခံသည်။အိုင်စီအက်စ်(I.C.S) ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပြီး အမျိုးသားကောလိပ်ကို တည်ထောင်သော ဗင်နိုဂို့ရှ်၏ ကောလိပ်တွင် အရှင်ဥတ္တမက ပါဠိနှင့် ဗုဒ္ဓ ဘာသာစာပေတို့ကို ကူညီပို့ချ ပေးလေသည်။
သက္ကတစသော ရှေးဟောင်းဟိန္ဒူစာပေကျမ်းများကို သင်ယူဆည်းပူးသည်။ထိုအချိန်မှာ မြန်မာပြည်တွင်လည်း နိုင်ငံရေးကိုတက်ကြွစွာ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုကြသေးသော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကလျာဏယုဝအသင်း (Y.M.B.A=youngmen'sbuddhistsassociations)ကိုတက္ကသိုလ်ပညာတတများဖြစ်သောဦးဘဖေ
(ဘကြီးဘဖေ) ၊ ဦးမောင်ကြီး(အမ်အေ) ၊ ဦးစိန်လှအောင်တို့က စတင်ဖွဲ့စည်းထုထောင်ပြီး အမျိုး ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် စတင်လှုပ်ရှားလာကြသည်။ အရှင်ဥတ္တမကိုယ်တော်တိုင်အိန္ဒိယမှ ပြန်ရောက်လာပြီး ၀ိုင်အမ်ဘီအေလှုပ်ရှားမှုကို တက်ကြွစွာ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။၁၉၀၇-ခုနှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီလ-၁ရက်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားသည်။ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အနောက် ဟွန်ဂွန်ဂျီ ဘုရားကျောင်းအကြီးအမှုး
(Abbot of Western Hongonji Temple) မင်းသားကြီး ကိုဇင်အိုတာရီနှင့်အတူနေပြီး ကစ်စတိုမြို့ရှိ နိရှိဟွန်မွန်ဂျီ အမည်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသိုလ်တွင် ပါဠိပါမောက္ခအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ထိုစဉ် ဂျပန်စာ၊ စကား ၊ အယူဝါဒ ၊ ဓလေ့ထုံးစံတို့ကို ကိုယ်တိုင်သင်ယူပြီး တစ်နှစ်အကြာစာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်သည်။ ဆရာတော်သည် မြန်မာစာပေကျမ်းဂန်တို့အပြင်ပါဠိ ၊ ဘင်္ဂါလီ ၊ နာဂရီ ၊ သက္ကဋ၊ အင်္ဂလိပ်၊ တိဘက် ၊ ဂျပန် ၊ပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုးမျိုးကို
လက်ရှိနေရပ် - ကလကတ္တားမြို့  ၄ အေ၊ ကောလိပ်စကွဲ
(College Square ) - မဟာဗောဓိအသင်း(Maha Bodhi Society)။
အလုပ်အကိုင် - ဘုန်းကြီး - ၀ါဒဖြန့်ချီရေးသမား။
အရပ်အမြင့် - ၅ ပေ ၄ လက်မ။
ကိုယ်လုံးကိုယ်တည် - တောင့်တင်းသည်။
ဆံပင် - ပြောင်အောင်ရိတ်ထားသည်။
မျက်ခုံးများ - ပါး၍ကောက်ကွေးသည်။
နဖူး - ကျယ်၍မြင့်သည်။
မျက်လုံးများ - နက်ပြောင်သည်။
မျက်စိအမြင် - မျက်မှန်တပ်ရသည်။
နှာခေါင်း - ကြီးသည်။
ပါးစပ် - စိစိပိတ်သည်။
လက်ချောင်းများ - တို၍ တုတ်သည်။်
နားရွက်များ - အနေတော်။ ဦးခေါင်းနှင့် ကပ်နေသည်။နားဖောက်ထားသည်။
မျက်နှာ - ၀ိုင်းသည်။
အသားရောင် - အ၀ါရောင်ဖျော့ဖျော့။
မှတ်ဆိတ်မွှေး - မရှိ။
နှုတ်ခမ်းမွှေး - မရှိ။
အမှတ်အသား - အပေါ်နှုတ်ခမ်းလက်ဝဲဘက်တွင်စောင်းစောင်း
ဓါးပြတ်ရာတစ်ခုရှိသည်။ ဂုတ်တွင် မှည့်တစ်လုံးရှိသည်။ နဖူး၏ လက်ျာဘက်၌
ထူးခြားချက်များ - မတ်မတ်လမ်းလျှေက်သည်။ စကားကို ကျယ်ကျယ်နှင့်မြန်မြန်
ရခိုင်သံဝဲ၍ပြောသည်။ အိန္ဒိယ အမျိုးသားတစ်ဦးကဲ့သို့ ပြုံး
ရွှင်သော အမူအရာရှိသည်။ စကားပြောရာ၌ ပွဲကျအောင်ပြောသည်။
၀တ်ဆင်နေကျ - ပင်နီိပိတ်ဖြင့် လုပ်ထားသော သင်္ကန်းအ၀ါရောင်။
မြန်မာနိုင်ငံ မှုခင်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဌာန ( C. I .D Burma) ရှိထောက်လှမ်းရေးဌာနမှ မြန်မာအရာရှိအားလုံး။
“၂၂ နှစ် ကြာခဲ့ပြီးမှ”
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဗဟုသုတကို ဗမာ့နိုင်ငံရေးလောကသို့ သယ်ယူဆောင်ကြဉ်းလာ၍ ဗမာပြည်သူပြည်သားများအား နိုင်ငံရေးအသိဉာဏ်မျက်စိကို ပထမဆုံး ဖွင့်ပေးခဲ့သည့်
အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏ စစ်တပ်၊ ပုလိပ်တပ်၊ ရုံး၊ ထောင်၊ ဂါတ်အမျိုးမျိုးနှင့် ဥပဒေဆိုးကို ရောစွက်ကာအဘက်ဘက်မှ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကိုခံနေရချိန်တွင်ဗမာပြည်သူပြည်သားရဟန်းရှင်လူများအားနယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးသဘောတရားနှင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းကို ပထမဆုံး ပေါင်းစပ်ပေးခဲ့သည့် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ……နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲတွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေးအရ ပထမဆုံး ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းခံရ၍ ဗမာတစ်မျိုးသားလုံးအား ရှေ့ဆောင်လမ်းပြခဲ့သည့်ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ…….ဆရာတော်၏ဘွဲ့အမည်နာမသည် ဆရာတော်ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည့် ၁၉၃၉ ခုနှစ်မှစ၍ ရေတွက်သော် နှစ်ပေါင်း ၂၂ နှစ် ကြာခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည့် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှစ၍ ရေတွက်သော် နှစ်ပေါင်း ၁၂ နှစ်တိုင်တိုင် ရှိခဲ့ပြီးမှ “ဦးဥတ္တမ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့”၏ ၆-နှစ်တိုင်တိုင် ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် လွန်ခဲ့သော ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁၇ ရက် (ဆရာတော်၏ ၈၂ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ဖြစ်သော ပြာသိုလဆန်း ၁၂ ရက်) နေ့က ရန်ကုန်မြို့တော်မှ ပန်းခြံတစ်ခုအား “ဦးဥတ္တမပန်းခြံ”ဟူ၍ အမည်တပ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရ လေသည်။
မည်သို့င်ဖြစ်စေ ယင်းအမည်တပ် သတ်မှတ်မှုသည် တစ်စုံတစ်ခုသောတိုက်ဆိုင်မှုကြောင့် ထူးခြားသည် ဆိုင်နိုင်လေသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့သမားများ ဗမာပြည်ကို ၀င်ရောက် သိမ်းပိုက်ပြီး အင်္ဂလိပ်စစ်တပ် အလုံးအရင်းနှင့် တပ်စခန်းချရာစစ်နယ်မြေကို အကြောင်းပြု၍ အမည်ပေးခဲ့သော ရွှေတိဂုဏ်စေတီတော်ခြေရင်းမှ“ကန်တော်မင်ပန်းခြံ”ကိုယင်းအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့စစ်တပ်များ၏အကြမ်းဖက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှုများအကြားမှ မတုန်မလှုပ် နောက်မဆုတ်ဘဲ ရဲရဲတောက်ရင်ဆိုင်ခဲ့သောဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၏ ဘွဲ့အမည်ကို ပြောင်းလဲကာ “ဦးဥတ္တမပန်းခြံ”ဟူ၍ သတ်မှတ်လိုက်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်ပေသည်။
အဆိုပါဦးဥတ္တမပန်းခြံစတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့ကဦးဥတ္တမ၏နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ချက်များကိုပန်းချီဖြင့်သရုပ်ဖော်ထားသည့်ရှည်လျားသည့်ပိတ်ကားနံရံကြီးနှင့်ထိုနံရံကြီးရှေ့အလယ်ဗဟိုတွင်ဦးဥတ္တမရုပ်တုပု့တော်(ရွှံ့စေးနှင့်ကိုယ်တပိုင်း) ကို တွေ့မြင်ကြရသည်။
ယင်းနံရံပန်းချီနှင့် ဆရာတော်၏ ရုပ်တုပုံတော်များမှာ ယာယီဆင်ယင်ပြသထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တကယ်တန်း ထုလုပ်ပြီးစီးသည့်အခါတွင် လေးကိုင်းသဏ္ဍာန် နံရံကြီးမှာ အလျား ၆၅-ပေ အမြင့်၁၂ပေရှိမည်ဖြစ်၍နံရံကြီးရော နံရံမှ ကိုယ်လုံးကြွရုပ်ပုံများပါ အင်္ဂတေဖြင့် တွေ့မြင်ကြရမည် ဖြစ်သည်။
ဦးဥတ္တမ ပုံတော်မှာလည်း အလုံးစုံပြီးစီးသည့်အခါတွင် အမြင့် ၉-ပေရှိ မတ်တတ်ရပ် ကြေးရုပ်ပုံတော်ကြီးအဖြစ် သွန်းထုပြုလုပ်ထားရှိမည်ဟု သိရသည်။အဆိုပါ နံရံပန်းချီရုပ်တုများနှင့်အထူးသဖြင့် ဦးဥတ္တမဆရာတော်၏ ကြေးရုပ်ပုံတော်ကို ပန်းပုဆရာကြီး ဦးဟန်တင်က သွန်းလောင်းထုလုပ်ရန် စီစဉ်ရာထားသည်။
ပန်းခြံဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားနေ့က မြင်တွေ့လိုက်ရသော ဆရာတော်၏ ကိုယ်တပိုင်းရုပ်ထုမှာ ဆရာဦးဟန်တင်၏ အနုပညာလက်ရာ မြောက်မှုကို အပြည့်အ၀ ဖော်ပြနေသည်ဟုပင် ဆိုနိုင်သည်။ဦးဟန်တင်သည် ဆရာတေ်၏ ပုံကို လွန်ခဲ့သော ၂-နှစ်ခန့်ကပင် ထုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ သို့ထုလုပ်စဉ်က ယင်းပုံတူရုပ်တုကို မည်သူကမှ ခိုင်းစေခြင်းမပြုခဲ့သည်မဟုတ်၊ ပန်းပုဆရာပီသသည့် ဦးဟန်တင်၏ အနုပညာဗီဇကြောင့် တိုင်းပြည်တွင် ထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များ၏ ရုပ်တုပုံတူများကို အချိန်ရတိုင်း အလဟဿမဖြစ်စေဘဲ ထုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤတွင် ၁၉၅၄ ခုနှစ်ကပင် စတင်၍ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့သောဦးဥတ္တမအထိမ်းအမှတ်ကော်မတီသည်ဆရာတော်ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ကြေးရုပ်ပြုလုပ်ထားရှိရန်နှင့် ဦးဥတ္တမလမ်း ဦးဥတ္တမပန်းခြံ၊ ဦးဥတ္တမ စာသင်ကျောင်း စသည်တို့ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတို့နှင့် တဘက်မှ အရေးဆိုနေလေရာ ဦးဟန်တင်သည် ယင်းကော်မတီနှင့် တွေ့ဆုံကာ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမပုံတူရုပ်တုကို ပြသခဲ့သည်။
ကော်မတီကလည်း ပို၍ တိကျသေချာစေရန် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ နှစ်မ ဒေါ်အိမ်စိုးကို ခေါ်၍ ရုပ်တုကို ပြသခဲ့ရာ ဒေါ်အိမ်စိုးသည် ဦးဟန်တင်၏ လက်ရာဖြစ်သော ဆရာတော်၏ကိုယ်တပိုင်းရုပ်တုကို ကြည့်ကာ မျက်ရည်ကျခဲ့ရရှာသည်။
သို့ဖြစ်ရာ ဦးဥတ္တမ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ၏ တာဝန်ပေးချက်အရ ဆရာတော်၏ ကြေးရုပ်ပုံတူ (တကိုယ်လုံး) ထုလုပ်ပြီးစီးသည့်အခါတွင် ဆရာဦးဟန်တင်၏ လက်ရာပြောင်မြောက်မှုဖြင့် ဆရာတော်၏ ကြေးရုပ်မှာ ယခုထက် ပိုမိုသက်ဝင် လှုပ်ရှားလာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ သည် ကျဉ်းမြောင်းနုန့်နဲ့သော အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်များ ကမ္ဘာကိုလွှမ်းခြုံ၍ နေစဉ်၌ပင် လွတ်လပ်ရေးစိတ်ကား တမျိုးသားတည်း တပြည်ထောင်တည်းအတွက်သာ မဟုတ် နယ်ချဲ့ကိုလိုနီ စံနစ်အောက်၌ စုန်းစုန်းမြုပ်သော အာရှတိုက်ကြီးတတိုက်လုံးအတက်ဖြစ်သည်ဟု စွဲမှတ်ယုံကြည်ရုံမက နယ်ချဲ့ ၏မျက်နှာကို ရဲရဲကြည့်ကာ နယ်ချဲ့ ၏အင်အားဖြင့် ဖိနှိပ်သမျှသောဆင်း ရဲ ဒုက္ခမျိုးမျိုးတို့ကို မတွန့်မဆုတ် ခံယူခဲ့၏။
ဆရာတော်၏ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်မန်မာနိုင်ငံသားတို့သည်အိပ်သောယေက်ျားနိုးသောလားသို့လွတ်လပ်ရေးလမ်းစကိုမြင်ကြရ၏။ ဆရာတော်ကား ယခုမြန်မာ နိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံတော်သားတို့ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် အပိုင်ရ၍ ခံစားစံစားနေရသော အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်လွတ်လပ်ရေး ဗိမာန်ကြီးကို အစဦးစွာ ပန္နက်ချခဲ့သောအာဇာနည် မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေ တည်း။
ခေါင်ဇာနည်ဝင်၊ ပြောင်မာတင်သည့်၊ မြရှင်သကျ၊ သမ္ဗုဒ္ဓ၏၊ ပုတ္တရင်းစစ်၊ ဖြစ်ကြီးဖြစ်၍၊ မဟစ္ဆရီ၊ အံ့လောက်ဘိသား၊ တြိသာသနာ၊ စက်ရောင်ဝါနှင့်၊ မြန်မာမျိုးညွန့်၊ ညှိုးမတွန့်အောင်၊ သက်စွန့်လျက်ပင်၊ ရွှေလမ်းထွင်သား၊ အရှင်ဥတ္တမ၊ ထေရိန္ဒလျှင်၊၀ံသပါလိတ်၊ ရဲတိဟိတ်သို့၊ စိတ်စေတနာ၊ စူးစိုက်စွာလျှင်၊ မဟာဝရဇိန်၊ မိုးကြိုးရှိန်သို့၊ ပစ်ချိန်ကျင်းကျင်း၊ ရန်မာန်ခွင်းသည်၊ ဘက်ကင်းတေဇော်ရှိန်ဘုရား။သူ့ကျွန်မခံ အမျိုးသားဇာတိမာန် ထက်သန်စွာဖြင့် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ဦးစွာပထမ မြန်မာပြည်သူများကို စတင်တပ်လှန့် နှိုးဆော်စည်းရုံးခဲ့သူမှာ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမပင်ဖြစ်ပေသည်။
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသည် ဒေးဒရဲမြို့အပိုင် ဆူးကလပ်ရွာတွင် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး တရားဟောပြောမှုဖြင့် မအူပင်ထောင်တွင် ၁၂ လမျှ အကျဉ်းချခံခဲ့ရသည်။၁၉၂၂ ခု ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် မအူပင်ထောင်မှ လွတ်မြောက်သည်။ ထိုသို့ ဆရာတော် ထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသည့်အခါ ၁၉၂၂ ခု ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ရဟန်းရှင်လူများက ရန်ကုန်မြို့ ဂျူဗလီဟောတွင် တခဲနက် ဂုဏ်ပြုပူဇော်ကြသည်။ ယင်းပူဇော်ပွဲတွင် လယ်တီပဏ္ဍိတဆရာ ဦးမောင်ကြီးက အထက်ဖော်ပြပါ ဘဒ္ဒန္တဥတ္တမအရှင်သူမြတ် ဘုန်းတော်ဘွဲ့မင်္ဂလာရတုဖြင့် ရေးသားပူဇော်ဂုဏ်ပြုခဲ့လေ ည်။
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသည် ဤသို့ ချီးကျူးပူဇော်ခံထိုက်အောင်ပင် ကျွန်ဘ၀မှ လွတ်မြောက်ရေး၊ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေးတို့တွင်အမျိုးသားများတက်ကြွလာစေရန်ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ၏ဘ၀နိဒါန်းပိုင်းသည်တနိုင်ငံလုံးအုတ်အုတ်ကျက်ကျက်တခဲနက်ဖြစ်အောင်အောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့သော်
လည်း ဆရာတော်၏ ဘ၀နိဂုံးမှာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ် ကောင်းလှသည်။
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသည် ၁၉၁၁ ခုနှစ်မှ အစပြု၍ ကလောင်ကိုကိုင်၍ တရားဟော စင်မြင့်ပေါ်တက်၍ မြို့ပြမှသည် ကျေးစွန်ရွာဖျားအထိ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကိုလိုနီဆန့်ကျင်ရေးအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
သူပြောသမျှ စကား၊ သူဟောသမျှ ရဲရဲတောက် တရားများသည် လွတ်လပ်ရေး မွတ်သိပ်နေသူပြည်သူများအဖို့ အားဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒူးထောက်ခေါင်းငုံ့နေကြရရာမှ ရင်ကော့ခေါင်းမော့လာနိုင်ကြသည်။“ဆာဂျီနယ် ကရက်ဒေါက်………သင် ဗမာပြည်က ထွက်သွားလိုက်ပါ”ဆရာတော်က အုပ်စိုးသူ အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ခံထံ စာဖြင့် ကန့်ကွက်ရေးသားပေးပို့ လိုက်သည့်အခါ အမျိုးချစ်သူများက ကြက်သီးမွေးညှင်းထမျှ အားရကျေနပ်ခဲ့ကြသည်။
ဆရာတော်အား ဆူကလပ်ရွာတွင် အင်္ဂလိပ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်ဟောပြောမှုဖြင့် မအူပင်တွင် ထောင်ဒဏ် အပစ်ပေးလိုက်သည့်အခါ ပုသိမ်မှစ၍ တနိုင်ငံလုံး သံဃသမဂ္ဂီ အသင်းများ၊ ကုမ္မာရီအသင်းများမှာ အုံကြွမှုပေါ်ပေါက်လာ၍ တနိုင်ငံလုံး စည်းလုံးမိသွားကြသည်။
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသည်ပြည်သူများ၏လေးစားကြည်ညို၍ပြည်သူများနှင့်တသွေးတည်းတသားတည်းဖြစ်သည်။ အစိုးရ အကြည်ညိုပျက်အောင် ဟောပြောမှုဖြင့်၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်မြို့တွင် ထောင်ဒဏ် ၃နှစ်ရုံးတင်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည့်အခါဖိုက်စကွဲယား(ပန်းခြံဗန္ဓုလပန်းခြံ)တွင်သွေးမြေကျလူထုဆန္ဒပြပွဲ
ဆရာတော်၏ ဘ၀နိဒါန်းပိုင်းသည် လွတ်လပ်ရေး၊ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး မီးရှူးတန်ဆောင်။ဆရာတော်၏ ဘ၀နိဂုံးပိုင်းက ထိုသို့မဟုတ်ပြီ။
အင်္ဂလိပ်အစိုးရက အိမ်ကြက်ခြင်း အိုးမည်သုတ်ခွပ်စေသော ၉၁ ဌာန အုပ်ချုပ်ရေးကို ပေးအပ်လိုက်သဖြင့် မြန်မာပြည်ကို အိန္ဒိယပြည်က ခွဲထွက်ပြီးလျှင် ၁၉၃၆ ခု၊ နိုဝင်ဘာလတွင် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် စီစဉ်သည်။သည်တွင်နိုင်ငံရေးပါတီများအဖို့အနိုင်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းရာ၌ဆရာတော်ဦးဥတ္တမကိုချဉ်းကပ်စည်းရုံးကြသည်။
လည်းကောင်း နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်မှု ရပ်ဆိုင်း၍ အိန္ဒိယနှင့် ဗမာပြည် အလျဉ်းသင့်သလို နေထိုင်လျက် ရှိနေသည်။
ထိုစဉ် ငါးဖွင့်ဆိုင်အဖွဲ့မှ ဆရာတော်အား လှည့်ဖျားစည်းရုံး၍ အိန္ဒိယမှ ရန်ကုန်သို့ ပင့်ဆောင်လာကြသည်။ နိုင်ငံရေးစိတ်မကုန်သောဆရာတော်မှာငါးပွင့်ဆိုင်အတွက်မဲဆွယ်ပေးရန်ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြန်သည်။
ကောင်းသော ငါးပွင့်ဆိုင်များ၏ စကားနားဝင်သဖြင့် မည်သို့မျှ မတတ်နိုင်ကြတော့ချေ။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် ငါးပွင့်ဆိုင်အတွက် အနယ်နယ်တရားဟောရာတွင်လေယာဉ်ပျံနှင့်ပင်ခမ်းခမ်းနားနား ကြွရောက်ဟောပြောရသည်။ ဆရာတော်ကို မမြင်မတွေ့ရသည်မှာ ကာလအတန်ကြာပြီဖြစ်သဖြင့် ဆရာတော်၏ ငါးပွင့်ဆိုင်တရားပွဲမှာ ပရိသတ်တိုးမပေါက်အောင် စည်းကားသည်။
၉၁ ဌာန ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဦးဘဖေခေါင်းဆောင်သောငါးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့၊ဒေါက်တာဘမော်အဖွဲ့၊ဦးချစ်လှိုင်အဖွဲ့၊ ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်းတိှုှ့ဗမာသခင်အဖွဲ့၊ ဖေဘီယန်အဖွဲ့တို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ဆရာတော်၏ အရှိန်အ၀ါဖြင့် အခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့များထက် ငါးပွင့်ဆိုင်က အပြတ်အသတ် အမတ် ၄၆ နေရာဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ချေ။ အမတ် ၁၆ နေရာသာ ရရှိသည်။ ဒေါက်တာ ဘမော်ကညွန့်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့၍ နန်းရင်းဝန်ရာထူး ရယူသွားလေသည်။သည်တွင် ဆရာတော်ဦးဥတ္တမအဖို့ နိုင်ငံရေးသံဝေဂရစရာ ကြုံရလေတော့သည်။
နိုင်ငံရေးသမားအချို့မှာ ဆရာတော်၏ အရှိန်အ၀ါဖြင့် ၀န်ကြီး၊ အတွင်းဝန်နှင့် မင်းတိုင်ပင်အမတ်စသည်တို့ ဖြစ်ကုန်ကြသော်လည်း ဆရာတော်ဦးဥတ္တမမှာ ဆီးချိုရောဂါသည်ဘ၀ဖြင့် ပြုစုသူ ကင်းကာ ရပ်တည်ရာမရ စိတ်ထင်ရာ ရန်ကုန် လမ်းမများပေါ်တွင် လျှောက်သွားလျက်ရှိသည်။
ဆရာတော်သည် ဟောင်းနွမ်းစုတ်ပြတ်နေသော သင်္ကန်းကြီးကို ပိုသီပတ်ပီ ၀တ်ရုံ၍ လွယ်အိတ်ကြီး တလုံးလွယ်ကာ ထီဖိနပ်မပါ သတင်းစာတိုက်များသို့ လျှောက်သွားပြီး အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ သတင်းစာများကို တောင်ယူလေ့ရှိသည်။ ရရှိသော သတင်းစာများကို လမ်းဘေးတိုက်ရိပ်၊ သစ်ပင်ရိပ်များအောက်တွင် ထိုင်ဖတ်လေ့ရှိသည်။
အသက်အရွယ်ကြီး၍ အိုမင်းနေသည့်အပြင် ဆီးချိုရောဂါ၊ ခြေထောက်အနာကြောင့် ပိန်ချုံးကာ ခပ်ယဲ့ယဲ့မျှပင် သွားလာနေရသည်။ လမ်းတွင် သတိမေ့လဲပြိုနေသည့်အခါ ဆရာတော်ကို ကြည်ညိုလေးစားသူများက သူတည်းခိုရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးကြသည်။
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမသည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဝေဒနာနှစ်ရပ်စလုံးခံစားနေရလေသည်။ဆရာတော်အားပြုစုသူကင်း၍ ဤမျှအခြေအနေဆိုးလာသည့်အခါ ၁၉၃၉ ခု သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရခိုင်ရဟန်းတော်များ သမဂ္ဂအသင်း၏ ၄ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးမှ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမအား စောင့်ရှောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
ရခိုင်ရဟန်းတော်များသမဂ္ဂမှ ရဟန်းတော်များသည် ဆရာတော်နေထိုင်ရာ အာစရိယသမဂ္ဂအသင်းတိုက်သို့ သွားရောက် တွေ့ဆုံသည့်အခါ သွားရောက်တွေ့ဆုံသူများကိုအတွေ့မခံငြင်းဆန်လျက်သတိမကောင်းတော့ဘဲ လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေလေပြီ။သည်တွင် သူရိယတိုက်အုပ် ဦးဘကလေး၏ အကူအညီဖြင့် ရခိုင်သံဃာတော်များက
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမအား ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့ကုသခဲ့ကြသည်။
အထူးခန်းမရှိသေးသဖြင့်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအခန်းနံပါတ်၈ခုတင်နံပါတ်၁၇ကုသိုလ်ဖြစ်အခန်းတွင်တင်ပို့ကုသကြသည်။သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် သူရိယဦးဘကလေး၊ မြို့တော်ဝန် ဦးဘ၀င်း၊ ကပ္ပတိန် ဘဖူးတို့ ဆေးရုံသို့ သွားရောက်၍ ဆရာတော်အား အားပေးစကား ပြောကြားရာ ဆရာတော်မှာ စကားပီသအောင် ပြောနိုင်၍ သတိလစ်ခြင်း မရှိတော့ပေ။
သြဂုတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဦးဘကလေး အကူအညီဖြင့်ပင် ကုသိုလ်ခန်းမှ အထူးခန်း ၁၃ ခုတင် နံပါတ် ၁၁ သို့ ပြောင်းရွှေ့ကုသသည်။ ဆရာဝန်ကြီးများက အထူးဂရုစိုက် ကုသကြသည့်အတွက် ဆရာတော်၏ ဝေဒနာမှာ သက်သာစ ပြုလာသည်။
သို့သော် မအူပင် ထောင်ကျစဉ်အခါကပင် နှစ်ရှည်လများ စွဲကပ်လာသော ခြေထောက်ကင်ဆာရောဂါမှာ ရိုးရိုးကုသ၍ မဖြစ်နိုင်တော့၊ ခြေထောက်ဖြစ်ကုမှသာ အသက်ရှင်နိုင်တော့မည်။ဆရာဝန်ကြီးများက ဦးဘကလေးအား အကြံပေးသဖြင့် ဆရာတော်အား လျှောက်ထားရာဆေးရုံပေါ်မှ ဇွတ်ဆင်း၍ ၄၆ လမ်း ကုလားအသင်းတိုက်ပေါ်တွင် သွားရောက်သီတင်းသုံးနေလေသည်။ထို့နောက်ပိုင်းတွင် ဆရာတော်သည် ပြန်လည်
နာလန်မထူနိုင်တော့ဘဲ ၁၉၃၉-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၉)ရက်တွင် ပျံလွန်တော်မူသည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ပန်းခြံ
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ရဲ့အမှတ်တရကိုကျမသတိတရနဲ့ရေးခဲ့တာပါ။သူရဲ့ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့
သမိုင်းတလျှောက်ကို သေချာအသေးစိတ်ဖတ်ရှုချင်ရင်တော့ ( http://ottama.multiply.com/)
အဲဒီနေရာလေးတွင် အသေးစိတ်လေ့လာနိူင်ပါသည်။ကျမကိုယ်တိုင်လဲ ဖတ်ရှုပြီးပြန်လည်
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, September 08, 2009
*နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသား အာကာဗိုလ် အတွက်အမှတ်တရ*
လူငယ်တဦး။သူ့ကိုအိမ်မှာတော့ ချစ်ကို ။သူ့အကြောင်းလေးကိုအမှတ်တရအနေနဲ့ သူ့အဒေါ်ဖြစ်တဲ့ကျမက သတိတရနဲ့ သူအကြောင်းလေးကို ရေးလိုက်ပါတယ်။
ကျောင်းမှာစာတော်တဲ့လူတွေထားတဲ့(S)အခန်းကပါ။အတန်းထဲမှာအမြဲဆုရတယ် နှစ်တိုင်းပါ။ သူ့ကိုဆရာ ဆရာမတိုင်းချစ်ချင်ကြပါတယ်။၁၀တန်းကို ၅ ဘာသာဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်။
ကျမအမက ဖြစ်စေချင်လို့ သူဆေးကျောင်းကို တက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်မကြာပါဘူးကျောင်းဆက်မတက်ချင်လို့ စင်္ကာပူမှာကျောင်းသွားတတ်ခဲ့တယ်။ဆေးကျောင်းဒုတိယနှစ်ကိုဆက်မတက်တော့ဘဲစင်္ကာပူမှာကျောင်းဆက်
လာတယ်။အရာရာကိုပါ။သူကသိပ်နွဲ့လို့အိမ်ကစိတ်ပူကြတယ်အရင်နဲ့မတူတော့တဲ့ ချစ်ကို ဟာ လူကြီးလေး ဖြစ်လာခဲ့တာပါဘဲ။သူ့အဒေါ်တွေထဲမှာကျမနဲ့ သူ့နဲ့ကတော်တော်အနေနီးပါတယ်။ချစ်လဲချစ်တယ်။
တွေကိုသားသနားတယ်ဆိုပြီးသူပြောခဲ့တယ်။စစ်အစိုးရကပြည့်သူတွေကိုအားလုံးအမှောင်ချ ထားခဲ့တာနော်။ လူငယ်တွေအတွက်ဘာတိုးတက်မှုမှာမပေးဘူး။လူငယ်တွေတိုးတက်မှာလဲသိပ်ကြောက်တယ်။ပြည့်သူတွေကြည့်လိုက်ရင်လဲစားဝတ်နေရေးတွေအတွက်ရုန်းကန်နေရတယ်။ကျန်တာမစဉ်းစားရဲ့ဘူးတနေ့တနေ့ကိုယ့်ဝမ်းစာ
ကိုမနည်းရှာဖွေနေရတယ်။သူ စင်္ကာပူကပြန်လာတော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့သူရောက်ခဲ့တဲ့စင်္ကာပူနိူင်ငံကိုယှဉ်ပြီး
နောက်အရင်ကကျမအမျိုးသား ဒုတိယအကြိမ်ထောင်ထဲမှာတုံးကသူက(၈)တန်းတက်တုန်းပါ။သူအမြဲပြောတယ် အန်တီဘာလို့နိူင်ငံရေးလုပ်တာလဲအန်တီတို့လင်မယားနှစ်ယောက်အေးအေးနေတာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောခဲ့
ရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လုပ်ချင်ကြတယ် ဆိုတာသားနာလည်ပါပြီ အန်တီ။
သားလဲ သားတို့လိုလူငယ်တွေအတွက်တခုခုလုပ်ပေးချင်လိုက်တာဆိုပြီးသူပြောခဲ့ပါတယ်။သူပြန်ရောက်ပြီး သိပ်မကြာဘူးနောက်ကျမတို့လဲမဲဆောက်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ရတာ။ချစ်ကိုအဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဝင်
ပါဘူး။သူ့ဘဝမှာသူအဆင်ပြေပြေနေခဲ့ရတယ်သူခုရောက်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေပါ့မလားဟိုဟာဖြစ်မလား ဒီဟာဖြစ်မလား မလားတွေကျမအတွက်များခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၀၈ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၂ရက်နေ့ ညနေမှာဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူကိုဖမ်းတဲ့နေရာကတော့ရန်ကုန်မြို့၊ ဆရာစံလမ်း မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Gold Feather စားသောက်ဆိုင်မှာသားချစ်ကိုရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ညစာစားနေတုံးမှာ စစ်အာဏပိုင်တွေက ဖမ်းခဲ့တာပါ။သားချစ်ကိုနဲ့တူတူသူ့ရဲ့သူငယ်ချင်း(၅)ယောက်ပါဝင်ခဲ့တယ်။
တက္ကသိုလ်မှဒုတိယနှစ်အဝေးသင်ဥပဒေကျောင်းသားသီဟ၀င်းတင်၊နောက်သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးကဝေလင်းဖြိုး၊ ရန်နိူင်သ၊ူအပါအ၀င် စုစုပေါင်း (၆) ဦးပါ။
ဒါပေမဲ့ကျမတူလေးကခုတော့ဒီထောင်ဆိုတာကိုကြောက်စိတ်မရှိတော့တာသေချာနေပါပြီ ။နိူင်ငံရေးလုပ်တဲ့ လူတွေမည်သူမဆိုထောင်ကိုရောက်ကြရတာသူကောင်းကောင်းသိနေပါပြီ။သူ့စိတ်ထဲမှာထောင်ဆိုတဲ့နေရာဟာသူအတွက် သူရောက်ဘူးတဲ့နေရာတစ်ခုလိုသူနေတတ် နေပါပြီ ။
လင်မယားလဲထောင်ထဲရောက်မှာဘဲဆိုပြီးပြောသေးတယ်။နောက်သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုစုံစမ်းရတယ်။အရေးကြီးတာကျန်းမာရေးနောက်ဆက်စုံစမ်းကြည့်တော့သူတို့ကိုဘယ်ပုဒ်မနဲ့ဆွဲထားလဲဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်၊မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ အစည်းအရုံး (generation wave) အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၄င်းတို့ 
အား မတရားအသင်း ဖွဲ့စည်း တည် ထောင်မှု ပုဒ်မ (၆/၈၈) ဥပဒေဖြင့်တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်ကို နဲ့အမှုတွဲတွေကိုတော့၂၀၀၈ နိူဝင်ဘာလ ၂၀ရက်နေ့မှာအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။
၁။ ကျော်ကျော်(ခ)ဇေယျသော် ၆ နှစ်
အသီးသီး ကို အာဏပိုင်တွေကထောင်ချခဲ့ပါတယ်
၀င်းတင်ကို ညောင်ဦးထောင်နှင့်ကိုအာကာဗိုလ်ကို ကျောက်ဖြူထောင်သို့အသီးသီးပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်။
နေ လေးစားစွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
သားတို့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်နောက်သားတို့ရဲ့ (Generation Wave)မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး အတွက်လဲသားကသူရဲကောင်း၊)ဆိုတာသားမှတ်ထားလိုက်ပါ။
ကျမတူလေးအတွက်ကျမဒီနေရာကနေပြီးဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ဒီပို့စ်လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျမဒီပို့စ်လေးကို (Generation Wave)မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံးကနေပြီးဓာတ်ပုံတွေယူသုံးထားပါတယ်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, September 06, 2009
*သံတိုင်ကြား က N.L.D လူငယ်များ ရဲ့ ထောင်တွင်းမေ့လု...
* ကျန်းမာရေး မကောင်းသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ဆေ...